Kune avo vanobvumira ndege kubva ku Rikooo uye vasipo maitiro kana mavara
mubvunzo Kune avo vanobvumira ndege kubva ku Rikooo uye vasipo maitiro kana mavara
Mazvita wakagamuchira: 17
9 mwedzi 3 masvondo apfuura #995 by DRCW
Ndakatarisa vanhu vakawanda vane nyaya dzekutsvaga kubva panzvimbo ino, avo vanoshaya ndege, mavara matema mumifananidzo yephotoreal scenery. Kutanga rega nditaure zvishoma nezve FSX. Microsoft yakabuda neine shanduro nhatu muAdboxed Add. The Standard FSX, FSX Deluxe, uye pakupedzisira FSX Gold Edition. Kana iwe uine weHS Standard FSX kana Deluxe Editions uye usati wavandudza, iwe uchava nematambudziko nedzimwe ndege uye nzvimbo. Microsoft yakabuda nePCNUMX service packs (SP2 & SP1) kunze kwekuvandudzwa kweiyi misangano, kuchava nezvinetso. The Auto Loader Rikooo inopa mabasa zvakanaka chaizvo. Ndiri kukupa iwe nemapatipa anodiwa pasi apa, kukubatsira kugadzirisa nyaya idzi. Ndinovimba kuti ichabatsira
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: tuncayboran40
Time chokusika peji: 1.299 mumasekonzi